Xildhibaan ku baaqay in Farmaajo iyo Khayre is-casilaan [Daawo]
By Tifatiraha , Garowe Online
MUQDISHO, Soomaaliya- Mudane kamid ah Xildhibaanada Aqalka hoose ee Barlamaanka Soomaaliya ayaa ku baaqay inay is-casilaan Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo RW Xasan Cali Khayre maadama sida uu hadalka u dhigay ay ku fashilmeen hogaaminta dalka.
Xildhibaan Axmed Cismaan Daqare, ayaa khudbad uu ka jeediyay fadhi Barlamanka Soomaaliya Arbacadii shalay ahayd ku yeesheen Muqdisho, wuxuu ku dhaleeceeyay siyaasadda hogaanka ugu saraysa dowladda isagoo tilmaamay inay soo bandhigeen maamul jilicsan.
Dhaqane, wuxuu difaacay taliyaashii xilka laga qaaday ee Booliiska iyo Nabad Sugidda isagoo tilmaamay inay ahaayeen rag shaqadooda kasoo baxayay. Sidoo kale xildhibaankan ayaa aaminsan in mas'uul xil laga qaado aysan waxba ka badali doonin xaaladda waddanka.
Isagoo ka hadlayay amniga wuxuu xusay in madaxda dowladda Federaalka ay ku fashilmeen inay wax ka qabtaan, wuxuuna ku eedeeyay inay lacago ku bixinayaan bur-burinta maamul goboleedyada ka dhisan dalka.
Axmed Cismaan Dhaqane ayaa intaas ku daray in Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu yahay shakhsi kasoo horjeeda nidaamka Federaalka sidoo kale ku xiran qol.
Mudanahan oo hadalkiisa ku koobay dhaleecaynta madaxda ugu saraysa dowladda ayaa carrabka ku dhuftay dalku uu ka dagi la'yahay Khayre iyo Farmaajo.
Eedayntan waxaa bar-bar socotay difaacis ay samaynayeen Xildhibaanda taageersan dowladda.
Arrintan ayaa kusoo beegantay xilli madaxda DFS iyo maamul goboleedyadu shir uga socdo Muqdisho kaasoo looga hadlayo amniga, dagaalka Al Shabaab iyo xallinta khilaafaadka siyaasadeed ee dalka ka jira. Halkan ka Daawo
Jawaari ayaa ku eedeeyay Khayre inuu isaga soo amray Ciidamada la wareegay Xarunta Gollaha Shacabka...
Farmaajo oo isagoo ku sugan Muqdisho ka baaqday xuska maalinta Booliska
Soomaliya 20.12.2017. 13:18
Sababaha Madaxweyne Farmaajo Casuumaada ugu direy Madaxda Maamulada
Soomaliya 22.10.2017. 13:08
Farmaajo: "Masiibadii Soobe si aysan mar kale noogu soo noqon waa in dalkeena aan difaacnaa"
War Saxaafaded 25.10.2017. 18:57